Madfac ay rideen ciidanka AMISOM oo ku baaba’ay qoys degan duuleedka deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madfac ay rideen ciidanka AMISOM oo ku baaba’ay qoys degan duuleedka deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya tuuladda Faranga oo ku taala duuleedka deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in madfac ay rideen ciidamada AMISOM uu ku dhacay guri ay deganayaan qoys ka koobnaa 8 qof.
Madfacaasi ayaa la sheegay inuu qasaare xoogan gaarsiiyay qoyskaasi, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay ilaa 6 qof ka mid ah qoyskaasi, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 2 kale.
Sakariye Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay musiibadda ku dhacday qoyskaas ka kooban 8 qof, waxaana uu sheegay in qoyskaasi musiibadda ku habsatay dhamaantood marka laga reebo 2 ruux ay hilbahooda si xun u go’goeen.
“Walaaloow waxaan maqalnay jug aad u weyn oo cabsi weyn na-gelisay, markii aa ku cararnay goobta waa fiirin weynay sida uu madfacaasi u kala jar-jaray hilbaha dadka, laba qof ayaa ka nool qoyskaasi, iyagane dhaawacooda waa culus yahay” Sidaas waxaa yiri Sakariye Xasan oo aynu qadka teleefanka kula hadalnay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha deegaanka Shalaanbood ee gobolka Sh/hoose Nuur Cismaan Raage oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in madfac ay rideen ciidanka AMISOM uu ku habsaday qoyska ka koobnaa 8 ruux oo 6-ka mid ah ay isla goobta ku geeriyoodeen, halka 2 kale uu dhaawac aad u culus soo gaaray.
Ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal oo kasoo baxay saraakiisha AMISOM oo ay kaga hadlayaan duqeynta ay ciidankooda ka geysteen degaanka Faranga ee ku yaala duuleedka deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose, waxaana uu arrinkaan noqday mid soo laa-laabta, iyadoona aysan jirin cid arrinkaasi wax ka qabatay.